ग्रिनकार्डमा अमेरिकाबाहिर गएको एकबर्ष नाघिसक्यो, अब कसरी आउने ? « Khasokhas
ग्रिनकार्डमा अमेरिकाबाहिर गएको एकबर्ष नाघिसक्यो, अब कसरी आउने ?
ग्रिनकार्डवाहक अमेरिकाबाहिर लगातार एकबर्षभन्दा लामो समय बसेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिले अमेरिका प्रवेश गरेर ग्रिनकार्डको निरन्तरताका लागि नयाँ आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्छ । आफ्नो नियन्त्रणबाहिर रहेको अवस्थाका कारण एकबर्षभित्र अमेरिका आउन नसक्ने ग्रिनकार्डवाहकका लागि अमेरिकाको भिसा कानूनले रिर्टनिङ रेसिडेण्ड विशेष आप्रवासी भिसाको व्यवस्था गरेको छ ।
सम्बन्धित: एकबर्षभन्दा कम अवधि अमेरिकाबाहिर रहेको बेला ग्रिनकार्ड हराए वा एक्सपायर भए के गर्ने ?
सम्बन्धित: अमेरिकामा एसाइलम पेन्डिङ भएका र स्वीकृत भएकाहरुका लागि ५ अध्यागमन सुविधा
सम्बन्धित: एसाइलम स्वीकृत भयो, ग्रिनकार्ड आएको छैन, अब यात्रा गर्दा के गर्ने ?
श्रोत: अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र अमेरिकी दूतावास काठमाडौं
दुबै डोज भ्याक्सिन लगाएकाहरु १४ दिनपछि मास्क नलगाई भेट्न सक्ने सीडीसी निर्देशिका जारी
कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिनका सबै डोज लगाएका व्यक्ति मास्क नलगाइकन पनि निजी स्थलमा एकआपसमा भेटघाट गर्न सक्ने